ZTK - Taable Note
ZTK - b0028
ZTK Photo 2019-02-22 12:51
Sales ရာထူးများအတွက် လျှောက်ထားနိုင်ရန် Messenger မှတဆင့် Hi လာလုပ်ပေးပါ။ အသေးစိတ်ဖော်ပြထားပြီး တိုက်ရိုက်လျှောက်ထားလို့ ရမည့် Link အားပေးပို့ပေးသွားမှာဖြစ်ပါသည်။
ZTK Photo 2019-02-08 11:15
English စာကျွမ်းကျင်၍ Part-time အလုပ် (or) 2nd Job လုပ်ကိုင်လိုသောလူငယ်များအားခေါ်ယူသွားလိုပါသည် 😊
▪️အသက် ၁၈မှ ၂၄နှစ်အတွင်းရှိသူဖြစ်ရမည်။
▪️English Skill Advance Level ရှိသူဖြစ်ရမည်။
▪️Out-of-office Hour လုပ်ကိုင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။
ZTK Photo 2019-01-19 05:28
HR မန်နေဂျာခေါ်ယူခြင်း။ (Education Industry တွင်လုပ်ကိုင်ရန်ဖြစ်သည်။)
- သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၂)နှစ်ခန့်ရှိသူဖြစ်ရမည်။
- Internal Training၊ Team Building၊ Payroll၊ Rules & Regulation၊ Team Building၊ Contracting ကိစ္စရပ...
ZTK is feeling welcome. - ZTK 2019-01-09 06:35
သင့်ကစကားပြောကောင်းသူ၊ Problem solving ကောင်းသူ၊ အများကိုဂရုစိုက်တတ်သူ၊ စာရင်း/Data များနှင့်အလုပ်လုပ်ကိုင်လိုသူဖြစ်ပါသလား?
ဒါဆိုရင်တော့ ယခု Customer Service အလုပ်ကိုလျှောက်ထားလိုက်ပါ။ (Education လုပ်ငန်းတွင်လုပ်ကိုင်ရမှာဖြစ်ပါသည်။)
✔️တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှ ဘွဲ့ရပြီးသူဖြစ်ရမည်။ (Fre...
ZTK Photo 2019-01-08 10:26
Telemarketer + BtoB Sales များထပ်မံခေါ်ယူသွားလိုပါသည်။ (Female Only) (age under 25)
- Selling ကိုအထူးစိတ်ဝင်စားသူ၊ Passion အပြည့်ရှိသူဖြစ်ရမည်။ **
- စကားပြောကောင်းသူ၊ စိတ်ရှည်သူဖြစ်ရမည ...
ZTK Photo 2019-01-05 08:04
Sales Manager ခေါ်ယူခြင်း။ (လစာ Competitive Pay + Commission + Lunch)
မြန်မာနိုင်ငံ၏နံပါတ် (၁) Education Technology ကုမ္ပဏီတွင်လုပ်ကိုင်ရမည်။
- Sales & Sales Management အတွေ့အကြုံအနည်းဆုံး (၂)နှစ်ရှိသူဖြစ်ရမည် (...
ZTK Photo 2018-12-28 10:58
ZTK Photo 2018-12-23 01:53
Sales & Marketing Manager (Student Success) ခေါ်ယူခြင်း။
သင်ကိုယ်တိုင်က စာသင်ရတာ၊ သူများကိုပြန်သင်ပေးရတာကြိုက်သူလား? နိုင်ငံခြား Online Course တွေလည်းတက်ဖူးပြီး Education နယ်ပယ်မှာ 100% Passion ရှိပါလား? ဒီ Position ကိုလျှောက်ထားဖို့ဆ...
ZTK is feeling Manager ခေါ်ယူခြင်း. - ZTK 2018-12-22 05:12
ZTK is feeling Welcoming New Team Members.
Content Executive (Child Development)
The most challenging job in Myanmar!
ယနေ့ခေတ်လူငယ်များအလုပ်လုပ်ကိုင်ရာတွင် လစာအပြင် မိမိအရည်အချင်းအလျာက်အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသော လုပ်ငန်းခွင်၊ ရေရှည်တိုးတက်ဖို့အခွင့်အလမ်းရှိသောလုပ်ငန်းခွင်တွင် လုပ်ကိုင်ခွင့်ရဖို့အရေးကြီးလှပါသည်။
ကျွန်တော်တို့ Startup Company မှအောက်ပါ Course Facilitator Position အတွက် *ပညာရေးအထူးစိတ်ဝင်စားသော၊ Fr...
ZTK Photo 2018-12-05 09:37
မြန်မာနိုင်ငံ၏ အကြီးကျယ်ဆုံး ပွဲတော်များ ကျင်းပပြုလုပ်နေသည့် Organization တစ်ခုမှ အောက်ပါ position များခေါ်ယူနေပါသည်။
Event planning career ကို လျှောက်လှမ်းချင် သူများတွက် အထူးသင့်တော်သော အခွင့်အရေးကောင်းဖြစ်ပါသည်။
Junior Event Coordinator (300,000Ks + Bonus + Lunch) (2 post)